Tombontsoa ara-pahasalamana voajanaharin'ny Crocus Mangidy - Ne gerekir?
Crocus of Giz, hanitra prairie, daffodil fararano, crocus fararano
crocus mangidy; Antsoina koa hoe Giz Crocus, Meadow Fragrance, Autumn daffodil, Autumn crocus. Tena ilaina amin'ny fitsaboana ny rheumatism, nikris ary hemorrhoids. Manome haavon'ny 10-30 sm izy io, misy alkaloida misy poizina. Noho izany, tokony hojerena ny dosage.
Izy io koa dia ambolena ho zavamaniry haingo amin'ny zaridaina. Ny tranganà fanapoizinana mahery vaika dia hita amin'ny ankizy izay nanangona sy nihinana crocus mangidy. Ampiasaina amin'ny sehatry ny fitsaboana izy io.
Fitsaboana sy tombontsoa
Andraikitry ny varotra
mahasoa crocus mangidy
Fanaintainan'ny hozatra sy ny tonon-taolana
Mandrindra ny système digestif
Tombontsoa ho an'ny hemorrhoids
ZAVA-DEHIBE: Koa satria mety hiteraka fanapoizinana izany, dia tokony hampiasaina miaraka amin'ny torohevitry ny manam-pahaizana.
Momba ny crocus mangidy
Anarana hafa: Crocus of Giz, hanitra prairie, daffodil fararano, crocus fararano
Arabo: Süvrencan, Zaferan, Câdd'î, Lehlah
Latina: Sedum Acre, Colchicum autumnale
Ny toerana itomboany sy ny karazany: Maniry amin'ny toetr'andro mafana izy io.
Zava-ampiasaina: Voninkazo, ravina (rano)
Maniry amin’ny toerana mando izy io. Mila rano betsaka izany. Fianakaviana lilia izy io; Amin'ny fararano dia mamony ny voninkazo miloko mavokely 6. Ny ravina sy ny voankazo dia miseho amin'ny lohataona. Amin'ny fahavaratra voalohany dia mamony ny voninkazo mavokely sy mavo. Mivadika volomparasy ny lokony amin'ny tapaky ny fahavaratra.
Zavamaniry ahitra sy tuberous izy io. Ny ampahany ampiasaina dia tubers sy voa. Izy io dia ahitra maharitra izay maniry eny amin'ny ala sy ny tehezan-tendrombohitra. Maniry any Kastamonu, Giresun, Trabzon ary Artvin any Torkia izy, indrindra any avaratra sy avaratra atsinanan'i Anatolia. Mitombo kokoa any Eoropa izy io.
Manana ravina 3-5 izy io ary mivelatra rehefa mamony ny voninkazo. Ny endrik'izy ireo dia elliptika sy tsy misy volo.
Ny voninkazo dia sessile. 1-3 izy io, lakolosy. tepals (iray amin'ireo faritra ivelan'ny voninkazo) conjoined amin`ny endriky ny fantsona eo amin`ny farany ambany, maimaim-poana mavokely eo an-tampony. filaments (pedicel) 10-18 milimetatra ny halavany, tsy misy volo. antera (lohapejy) miloko volomboasary izy io. Amin'ny fararano (Septambra oktobra) mamelana ary maharitra volana maromaro ny fe-potoam-boninkazo.
Tsara ho an'ny rheumatism izy io.
Tsara amin'ny fanaintainan'ny hozatra sy ny tonon-taolana.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny nikris.
Izy io dia diérétique.
Diaphoretic izy io.
Manana endri-javatra laxative izy io.
Izy io dia manana ny mampiavaka ny rafi-pandevonan-kanina.
Manampy amin'ny fanalefahana ny fitohanana izany.
Mahasoa amin'ny hemorrhoids izy io.
Ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana izy io mba hitsaboana ny areti-maso sy ny mangidihidy.
Tany Angletera, ny mpahay siansa dia nahazo ny fanafody avy amin'ny nalaina tamin'ny zavamaniry crocus mangidy. manimba sela homamiadana hoy.
Ny zava-mahadomelina andrana dia lasa mavitrika ihany rehefa sendra zavatra simika navoakan'ny fivontosana.
Ny tahan'ny fatra sy ny matetika dia miovaova arakaraka ny aretina. Fatra voafetra sy fotoana fohy tokony ampiasaina ho toy ny Tsy tokony hihoatra ny 8 miligrama isan'andro ianao.
Ny voan'ny crocus mangidy dia nototoina tsara ao anaty laona misy tongolo gasy 2-3. Ny tapany misy rano azo dia asiana « cheesecloth » ary fonosina amin’ilay faritra marary noho ny rheumatism. Io fiakanjo io dia atao mandritra ny andro maromaro misesy.
Ny voa sy ny tubers dia ampiasaina ivelany.
FAMPIANARANA AMIN'NY FAMPIANARAN'NY DOKTERANA.
Ny alkaloid dia manana fananana poizina avo be. Ny zavamaniry crocus mangidy dia tokony hampiasaina eo ambany fanaraha-mason'ny dokotera.
Ny voka-dratsiny mahazatra indrindra dia;
Ny voka-dratsiny tsy fahita firy;
Ny fihenan'ny sela fotsy
toetry ny hoditra
Ny tsy fetezana amin'ny hoho
Ny anjara asan'ny crocus mangidy amin'ny varotra
Ny takamoa aondrana amin'ity karazana ity, izay fahita any amin'ny faritry ny Ranomasina Mainty, dia alaina amin'ity faritra ity ihany koa. Miovaova isan-taona ny habetsaky ny fanondranana. Koa satria misy alkaloida colchicine ny voan'ny zavamaniry, dia aondrana tsindraindray koa ny voan'ilay zavamaniry.
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny lazany dia ny mamelana amin'ny fiandohan'ny lohataona alohan'ny ankamaroan'ny voninkazo, ka mahatonga azy ho safidy voajanahary ho an'ny mpamboly. Mitombo kokoa any Eoropa izy io.
FAQ amin'ny crocus mangidy
Mitovy ve ny safrona sy ny ahitra?
Tsia, tsy izany.
Safrona, Izy io dia hybrid izay niforona fahiny tamin'ny karazana crocus.
Aiza no misy crocus mangidy any Torkia?
Maniry any Torkia ny crocus mangidy, indrindra any Anatolia Avaratra sy Avaratra-Atsinanana, any Kastamonu, Giresun, Trabzon, ary Artvin.
Azo hanina ve ny crocus mangidy?
Tsia, tsy azo resena.
Nisy tranganà fanapoizinana mahery vaika tamin'ny ankizy nanangona sy nihinana crocus mangidy.
Nahoana no tandindonin-doza ny crocus mangidy?
voninkazo kely teratany any Istanbul voay mangidy karazana, noho ny tanàn-dehibe tsy voafehy sy ny fambolen-kazo tsy araka ny tokony ho izy. harerahana tandindomin-doza.